भरिँदै गाउँघर : भारतबाट दसैं मनाउन घर फर्किए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भरिँदै गाउँघर : भारतबाट दसैं मनाउन घर फर्किए
आश्विन १७, २०७६ ठाकुरसिंह थारू
बर्दिया — बाँसगढी नगरपालिकाका सुरेश सुनार दसैं मनाउन घर फर्किएका छन् । उनी एक वर्षदेखि भारतको चण्डीगढमा मजदुरी गरिरहेका थिए । दसैंतिहार मनाएर फेरि मजदुरी गर्न उतै फर्किने सोचमा छन् । गाउँमै रोजगारी नभएकाले परदेश जाने गरेको उनले बताए । चाडपर्वका बेला प्रत्येक वर्ष गाउँ फर्किन्छन् ।
वर्षभरिको थकान मेटेर र साथीभाइ भेटेर उनी कर्मथलो फर्किन्छन् । गाउँका उनी जस्ता थुप्रै युवा कामका लागि मजदुरी गर्न स्वदेश तथा विदेश गएका छन् । चाडपर्वमा भने उनीहरू घर फर्किन्छन् । युवा फर्किने क्रम बढेपछि गाउँको रौनक फेरिएको छ । चहलपहल बढेको छ । ‘परिवारसँग भेट गर्न घर फर्किन्छौं । अरू बेला काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘घर बसेर मात्र के गर्नु ? भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्नुपर्छ ।’
बढैयाताल, मैनापोखरका अजय चौधरी पनि ६ महिनापछि भारतको राजधानी दिल्लीबाट फर्किए । त्यहाँको एउटा होटलमा वेटरको काम गर्दै आएका उनी खाडी मुलुक जाने प्रयासमा बिराम लागेपछि भारत पसेका थिए । गाउँमा उद्योग छैन । मजदुरीका लागि नेपालगन्ज जानुपर्छ । त्यहाँको भन्दा राम्रो कमाइ हुने भएकाले आफू भारत गएको उनको भनाइ छ । ‘तिहारसम्म कहीँ जान्नँ । साथीभाइसँग रमाउँछु । त्यसपछि सोच्नुपर्ला,’ उनले भने ।
सुरेश र अजय जस्तै भारतमा रहेका हजारौं नेपाली युवा अहिले दसैं मनाउन धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन् । मजदुरी, रोजगारी र अध्ययनका लागि जिल्लाबाहिर गएका पनि फर्किंदै छन् । धेरैजसो फूलपातीसम्म घर आइपुग्छन् । बसले छतमा समेत यात्रु राखी ओसारिरहेका छन् । गाउँघर गुलजार छन् । युवा फर्केपछि गाउँमा सांस्कृतिक एवं खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन् । मित्र मिलन र शुभकामना साटासाट गरिन्छ । चाडपर्वभन्दा अन्य समय गाउँमा बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भेटिन्छन् । ‘दसैंतिहार सकिएपछि गाउँ फेरि सुनसान हुन्छ,’ बढैयातालका सन्तोष चौधरीले भने, ‘यहाँका युवा रोजगारी खोज्दै गाउँ छाड्न बाध्य छन् ।’
चाडपर्वका बेला सबै फर्किंदा गाउँमा खुसियाली छाउने गरेको छ । प्रदेश ५ का सबैजसो र कर्णालीका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटका युवा मजदुरीका लागि पारि जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्परा नै बनेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ १०:४७
बर्दिया — बाँसगढी नगरपालिकाका सुरेश सुनार दसैं मनाउन घर फर्किएका छन् । उनी एक वर्षदेखि भारतको चण्डीगढमा मजदुरी गरिरहेका थिए ।
दसैंतिहार मनाएर फेरि मजदुरी गर्न उतै फर्किने सोचमा छन् । गाउँमै रोजगारी नभएकाले परदेश जाने गरेको उनले बताए । चाडपर्वका बेला प्रत्येक वर्ष गाउँ फर्किन्छन् ।
वर्षभरिको थकान मेटेर र साथीभाइ भेटेर उनी कर्मथलो फर्किन्छन् । गाउँका उनी जस्ता थुप्रै युवा कामका लागि मजदुरी गर्न स्वदेश तथा विदेश गएका छन् । चाडपर्वमा भने उनीहरू घर फर्किन्छन् । युवा फर्किने क्रम बढेपछि गाउँको रौनक फेरिएको छ । चहलपहल बढेको छ । ‘परिवारसँग भेट गर्न घर फर्किन्छौं । अरू बेला काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘घर बसेर मात्र के गर्नु ? भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्नुपर्छ ।’
बढैयाताल गाउँपालिकास्थित मैनापोखरका अजय चौधरी पनि ६ महिनापछि भारतको राजधानी दिल्लीबाट फर्किए । त्यहाँको एउटा होटलमा वेटरको काम गर्दै आएका उनी खाडी मुलुक जाने प्रयासमा बिराम लागेपछि भारत पसेका थिए । गाउँमा उद्योग छैन । मजदुरीका लागि नेपालगन्ज जानुपर्छ । त्यहाँको भन्दा राम्रो कमाइ हुने भएकाले आफू भारत गएको उनको भनाइ छ । ‘तिहारसम्म कहीँ जान्नँ । साथीभाइसँग रमाउँछु । त्यसपछि सोच्नुपर्ला,’ उनले भने, ‘यतै काम पाए भारत जाने कसको रहर हुन्छ र ?’
सुरेश र अजय जस्तै भारतमा रहेका हजारौं नेपाली युवा अहिले दसैं मनाउन धमाधम गाउँ फर्किरहेका छन् । मजदुरी, रोजगारी र अध्ययनका लागि जिल्लाबाहिर गएका पनि फर्किंदै छन् । धेरैजसो फूलपातीसम्म घर आइपुग्छन् ।
बसले छतमा समेत यात्रु राखी ओसारिरहेका छन् । गाउँघर गुलजार छन् । युवाहरू फर्केपछि गाउँमा सांस्कृतिक एवं खेलकुद कार्यक्रम आयोजना गरिन्छन् । मित्र मिलन र शुभकामना साटासाट गरिन्छ । चाडपर्वभन्दा अन्य समय गाउँमा बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भेटिन्छन् । ‘दसैंतिहार सकिएपछि गाउँ फेरि सुनसान हुन्छ,’ बढैयाताल गाउँपालिकाका सन्तोष चौधरीले भने, ‘यहाँका युवा रोजगारी खोज्दै गाउँ छाड्न बाध्य छन् ।’
चाडपर्वका बेला सबै फर्किंदा गाउँमा खुसियाली छाउने गरेको छ । प्रदेश ५ का सबैजसो र कर्णालीका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटलगायत जिल्लाका युवा मजदुरीका लागि पारि जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्परा नै बनेको छ । अधिकांश युवा पैसा कमाउन भन्दै भारतको कालापहाड, सिम्ला, गुजरातलगायत स्थानमा जाने गरेका हुन् ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ २०:००